यी हुन् महिलाका संवेदनशील अंग (सूचीसहित) – Deshko News
Home » स्वास्थ्य » यी हुन् महिलाका संवेदनशील अंग (सूचीसहित)
यी हुन् महिलाका संवेदनशील अंग (सूचीसहित)
पूरुषहरु सँधै सोचिरहन्छन् महिलाको सबैभन्दा संवेदनशील अंग कुने हो ? अधिकांश पुरुषको आँखा पर्ने अंगहरु बाहेक अन्य अंगहरु पनि यौनिक रुपमा निकै संवेदनशील मानिन्छन् ।
कतिपय अंगमा पुरुषको आँखा परिहाल्छ भने कतिपय अंगमा भने छोएपछि यौनिक उत्तेजना बढ्ने हुन्छ । यस्ता अंगहरु कुन कुन हुन ? हेर्नुहोस्
पुरुषहरु महिलाको पिठ्युँप्रति आकर्षित हुन्छन् । त्यतिमात्र होइन पिठ्यँु यौनिक रुपमा पनि उत्तैजना पैदा गर्ने भाग हो । यो महिलाको सबैभन्दा संवेदनशील भाग मध्यको एक हो ।
पुरुषहरु महिलाको पेट हेर्छन् । सारी लगाउँदा हल्का देखिने महिलाको पेटले पुरुषलाई आकर्षित गर्छ । त्यति मात्र होइन पेट चलाउँदा महिलाहरु यौनिकरुपमा उत्तेजित हुन्छन् । पातलो पेट भएका महिलाहरुप्रति पुरुषको आकर्षण बढि हुन्छ ।
महिलाहरुको कपाल चलाउनु पुरुषहरुलाई मन पर्छ । कपाल चलाइँिददा पनि महिलाहरु उत्तेजित अनुभव गर्दछन् । कपाल समेत महिलाको संवेदनशील अंग भित्र पर्छ ।
महिलाको कम्मर पुरुषको सबैभन्दा आँखा पर्ने स्थान हो । पातलो कम्मर हुने महिलाको सुन्दरताबारे सदियौं देखि चर्चा हुँदै आएको छ । बारुली कम्मर चलाउँदा पुरुष र महिला दुबैले रोमाञ्चित अनुभव गर्छन् ।
मुस्कान खासमा अंग होइन तर पुरुष स्त्री सम्बन्धमा यसको भूमिका महत्वपूर्ण छ । मुस्कान महिलाको त्यस्तो घातक हतियार हो, जसले पुरुषलाई घाइते बनाउँदछ । मुस्कानले पुरुषहरु उत्तेजित हुन्छन् वा भनौ पग्लिन्छन् ।
यो अंग यौनिक र सौन्दर्यको हिसाबले महत्वपूर्ण अंग हो । ओंठमा चुम्बन गर्दा स्त्रीहरु सबैभन्दा उत्तेजित हुन्छन् भने पुरुषहरु पनि महिलाको ओंठमा विशेष ध्यान दिन्छन् ।
महिलाका बक्षस्थल सेकेयड्री यौन अंग हुन् । किनभने यौन सम्बन्धको समयमा बक्षस्थलको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । स्त्रीको शरीरमा हुने अंगमध्ये बक्षस्थल सबैभन्दा संवेदनशील अंग हो ।
महिलाको पुठ्ठो अर्थात अंग्रेजीमा बट भनिने भाग पनि निक्कै संवेदनशील अंग मानिन्छ । यो अंगप्रति पुरुषको पनि विशेष आकर्षण हुन्छ । यौन सम्बन्धका बेला यो भागले उत्तेजनामा भूमिका हुुन्छ ।
कुनै पनि महिलाको आँखाले ती स्त्रीको चरित्र बताउँछ । आँखाबाट पुरुष आकर्षित हुन्छन् । आँखाले उत्तजेजक र मनमोहक भूमिका खेल्ने गर्छ ।